ညီလင်းသစ်: ချန်ဂီ၏ တံခါးများသို့ ...
Posted by ညီလင်းသစ် au 25.11.12
haveanice trip to Singapore and happy meeting with beloved friends...
သာယာလှပပြီး အေးချမ်းတဲ့ စင်္ကာပူခရီး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ဒကာတော် ညီလင်းသစ်ရေ။
ချန်ဂီဆိုတာနဲ့ ပြန်သတိရသွားပီ။ အဲမှာ မျက်စိလည်ချင်စရာကြီး။ အကျယ်ကြီးဆိုတော့လေ။
ဒါနဲ့ အိန္ဒိယကို ဘုရားမလာတော့ဘူးလား။ ဒကာတော်နဲ့ ဆိုချင်ပါသေးတယ်။ အိန္ဒိယလာမယ်ဆို ကြိုပြောနော်။
ဒါနဲ့ ကလေးလေးက သွားပြန်ပေါက်နေပြီလား။
တွေ့ဆုံသူတွေ ရေးတဲ့ ဘလောခ့်ပိုစ့်တွေမှာ အကို့ကို တွေ့အောင်ရှာရမယ် :P မပုန်းကြေးနှော် . . :)
Thank you so much...sis!
တင်ပါ့...၊ အိန္ဒိယကိုလည်း လာချင်ပါတယ်ဘုရား..၊ အခါအခွင့် သင့်တဲ့ တစ်နေ့တော့ဖြင့် ဖြစ်လာကောင်းပါရဲ့လို့ ...၊း) ကလေးလည်း သွားပြန်ပေါက်နေပါပြီ ဘုရား...၊း)
မပုန်းပါဘူးဗျာ..၊ မသကာ အဲဒီလူတွေကို နှုတ်ပိတ်ရုံလောက် ပါပဲ...။း))
အားကျလိုက်တာ အကိုရာ ဘလော့ဂါတွေနဲ့ တွေ့ ဖြစ်ပြီပျော်ရွှင်သောခရီးစဉ်ဖြစ်ပါစေ..
Welcome from Singapore... ကိုညီလင်း... တွေ့ကြမယ်နော်...း)))
ပျော်စရာကြီးဟယ်.... လာပူးပေါင်းချင်သား... ဒါပေမဲ့ ဖေဖော်ဝါရီအတွက် စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ... နောက်တခါ အခွင့်ကြုံရင် ဆုံချင်ပါတယ်ညီလင်းသစ်ရေ...
ပျော်စရာကြီး ဘလော့ဂါတွေတွေ့ရင် စကားတွေြေ့ပာမဆုံးဖြစ်အုံးတော့မှာပဲ ။
ကျနော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ပြောတယ် အော်.. ဘလော့ဂါ ဆိုတာ တော်တော်စကားများတဲ့ အမျိုးပါလားတဲ့ :)
ဘလော့ဂါနံပါတ် နောက်တစ်ခုတိုးပြီး ချိတ်လို့ရအောင် စင်္ကာပူသွားမဲ့ ခရီးစဉ်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ရက်ကို ပြောင်းလိုက်မှထင်တယ် :P
မောင်ညီလင်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ စနစ်ကျပုံများ ချီးကျူးပါတယ် အခုလို Plan ကိုသေသေသပ်သပ် ဆွဲထားတာ သဘောကျပါ့။ ချန်ဂီကို သူများတကာ ချစ်အောင်လည်း ရေးတတ်တယ်း)
ဲခြင်္သေ့ကျွန်းမှ နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။ ^_^
တွေ့ ရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ဗျို့... အနားနီးတော့ မက်စိပို့ လိုက်မယ် ...
လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏ ကိုညီ။ လာခါနီး အီးမေလ်ပို့ပြီး အဆက်အသွယ် ပြုစေချင်။ ကိုယ်လဲ စင်ကာပူမှာ အာဂန္တု ဆိုပေမယ့် ဂျုနီယာ အာဂန္တုအား လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုရင်း စင်ကာပူရဲ့ ကာလာစုံလူမျိုးတွေကြား လှည့်ပတ်ကာ တူတူသွားချင်။
အဲ..ပျော်စရာကြီး..စလုံးကဘလော့ဂါတွေနဲ့အစုံတွေ့ရမပေါ့...။ နင့်အသက်ငါ့ပေးဆရာကြီးကိုညိမ်းနိုင်နဲ့တော့ တွေ့ဖြစ်အောင်တွေ့ခဲ့ပါလို့ မှာချင်ပါတယ်...။ တခြားဘလော့ဂါ အမတွေ အကိုတွေလည်းအများကြီးပါ ဒါပေမယ့် အဲဒါလမှာ မြန်မာပြည်ပြန်လာမယ့်သူလဲ ခပ်များများရယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ခရီးစဉ်လေးဖြစ်ပါစေကိုညီလင်း... ခရီးသွားပို့စ်လေးဖတ်ရဦးမပေါ့...း)
warmly welcome from singapore..
လာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာတယ်..တွေ့ကြမယ် အစ်ကို...။
စာဖတ်ပရိတ်သတ် - ညီမ၀ါဆို
ချန်ဂီကို လှလှပပလေး ရေးထားလို့ သဘောတကျစိတ်နဲ့ ဖတ်နေမိတာ...
အောက်လည်း ရောက်ရော စင်ကာပူကလူတွေကို နည်းနည်း မနာလိုဖြစ်သွားသလိုပဲ :D
မြန်မာပြည်ကို လာဖြစ်ရင်လည်း လက်တို့ပါဦးရှင့်
ပြန်လာရင် ဓာတ်ပုံလေးတွေ ပါတဲ့ ပို့စ်လေး ဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင့်
လက်တစ်ကမ်းအကွာကနေ ချန်ဂီရဲ့ အပြင်ဖက်တစ်ခြမ်းကို လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီမှာ ထွက်ကြည့်နိုင်ပြီပေါ့.. :)
စင်္ကာပူကို ဘန်ကောက်ကနေ ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ။
ကျေးဇူးပါ မဘေဘီ..၊ ကျနော် ပြောပါ့မယ်၊ ဒါနဲ့ စကားမစပ်...
ခုတစ်လော နည်းနည်းပျောက်နေတယ်နော်...၊း)
ဖိတ်ခေါ်တာ ကျေးဇူးပါ အစ်မသက်ဝေ..၊ ဒီတစ်ခါတော့ ဆပ်ပြာပူဖောင်းလေးက
တလူးလူး တလွန့်လွန့် တက်လာခဲ့ပြီဗျ...၊း)
လာပူးပေါင်းနိုင်ရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲဗျာ..၊ တစုတဝေးထဲ... ပျော်စရာကောင်းမှာ၊ နောက်တစ်ခါပေါ့လေ...နော၊း)
ညီ့သူငယ်ချင်းရဲ့ မှတ်ချက်ကိုတော့ သဘောကျသွားပြီ၊ ကျနော်လည်း အဲဒီ အမျိုးအစားထဲ ပါနေမလား မသိဘူး...၊း)
အဲဒီလို ပြောင်းနိုင်ရင် အရမ်းကောင်းတာပေါ့ တီတင့်ရာ၊ တစုတစည်းထဲ ဆုံရတာပေါ့၊း)
လူတွေက တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ ဝေးနေကြတာ မဟုတ်လား...၊
ကျေးဇူးပါ ဇွန်ရေ...၊း)
အိုကေ ညီမရေ...၊ နီးလာတော့ ဆက်သွယ်ကြတာပေါ့...၊း)
လှိုက်လှဲတဲ့ ဖိတ်ခေါ်မှုအတွက် တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ ကျနော်တို့ ဆုံဖြစ်ကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..၊း)
အဲဒီ ဆရာကြီးကတော့ မပျက်မကွက် သွားတွေ့ရမှာ ပေါ့ဗျာ..၊ မဟုတ်ရင် ကျနော့်အသက် နှုတ်လိုက်မှ ဒုက္ခ...၊း)
အသေအချာကို ဆုံကြတာပေါ့ဗျာ...နော၊း)
စဉ်ဆက်မပြတ် အားပေးနေတာရော.. အခုတစ်ခါ ကြိုဆိုတဲ့ အတွက်ရော ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် ညီမရေ...၊
ကျနော်တို့ ထင်းခွေမကြုံ ရေခပ်တော့ ကြုံဖြစ် ကြမှာပါလေ...နော၊း) စိတ်ချပါဗျာ..၊ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်ကျရင် လက်တို့လိုက်ပါ့မယ် ညီမရေ...၊း)
လက်မှတ်အတွက် ဆိုရင်တော့ ကျနော် တနည်းနည်းနဲ့ ကူညီနိုင်တာရှိမယ်ဆိုရင် ပြောပါနော်...၊
သိပ် သေချာတာပေါ့ဗျာ..၊ ဒီ အချိန်တွေကို ကိုညိမ်းနဲ့ ကျနော်မှ မသိမ်းပိုက်ရင် ဘယ်သူကများ လာပြီး သိမ်းပိုက်အုံးမှာလဲ...ကဲ၊း))
ဟုတ်တယ်ဗျ..၊ နောက်ဆုံးတော့ တံခါးဆိုတာ ပွင့်သွားရစမြဲပါပဲလို့ အားရပါးရ ရေရွတ် ပစ်လိုက်တယ်...၊း))
သိပ်ကောင်းတဲ့ အကြံပေါ့ဗျာ၊ ဒီဖက်ခေတ်မှာ လူနှစ်ယောက် စကားပြောဖို့ဆိုတာ တစ်မြေထဲပေါ်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်နေမှ မဟုတ်ပါဘူး၊း) အဆင်ပြေသလိုသာ ဆက်လိုက်ပါဗျာ...။း)
ချန်ဂီတံခါးရဲ့ တဘက်ခြမ်းမှာလည်း လည်ပင်းရှည်ရှည် ဗျိုင်းအုပ်တွေ တစ်ပြုံတစ်မကြီးပါအစ်ကို :)
Yeah.. :) Welcome from small island !
ပျော်စ၇ာကြီး နေမှာနော် အကို...အားကျထှာ..:) ပျော်ရွင်ဖွယ် ခရီးစဉ်လေးကို ဘလော့ပေါ်ကနေ မျှဝေ ခံစားပရစေ အကို... ခရိးစဉ်လေး အစမှအဆုံး ချောမွှေ့ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း ....
ပျော်စရာခရီးတစ်ခုဖြစ်မှာပါကိုညီ။ ကျမလည်း အတွေးထဲ၊စိတ်ကူးထဲကနေ လိုက်လည်မယ်လေ။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ ရမှာ တွေးပြီးပျော်နေပြီလား။
ဟုတ်ကဲ့...၊ မကြာခင်မှာတော့ ကတွတ်ပေါက်က ငါးတွေကို အတူတကွ သုံးဆောင်ရမယ့်အချိန် ရောက်လာတော့မှာပါဗျာ..၊း))
Thank you for your kind welcoming message!! :)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမရေ...၊ အဆင်ပြေသလို ပြန်ရေးပါ့မယ်..၊
ဟုတ်...၊ တွေးကြည့်ရတာကိုပဲ ပျော်စရာ ကောင်းလှပါပြီ၊း) (စိတ်ကူးနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်) လိုက်ခဲ့နော် အစ်မရှင်လေး...။း))
Welcome pa shint.... :)
အဖွင့်လေးက ကျွန်တော့်ရင်ထဲကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ၀င်လာတယ်။
ကိုညီ့ဆန္ဒတွေ ပြည့်ပြီပေါ့..ဘလော့ဂါတွေ၊ အချိန်ပေး စာလာဖတ်သူတွေ ဆုံတွေ့ ကြမှာကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေပါတယ်နော်..